SARIPIKA: Nandrava Ny Afovoan-tanànan’i Filipina Ny Rivo-doza Mahery Vaika Haiyan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2013 20:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 日本語, English
Ireo hany velona tamin'ny rivo-doza tao Ormoc, ao Leyte, nandoko ny arabe amin'ny marika hoe “VONJEO”. Sary tao amin'ny Facebookn'i Katreena Bisnar
Namely ny vondro-nosy Visayas ao Filipina ny “rivo-doza mahery vaika” Yolanda (na Haiyan) ka an'arivony ireo namoy ny ainy sy tsy manan-kialofana. Mety ho tafakatra hatramin'ny 10 000 mahery ireo niharan-doza satria mbola tsy fantatra hatramin'izao fotoana izao ny voka-dratsy ny loza tao amin'ireo tanàn-dehibe maromaro.
Nandravarava ny faritra tao Samar sy Leyte, tanànan'i Tacloban i Haiyan-Yolanda, izay nandalovan'ny foibeny ka namoizana ain'olona marobe. Tapaka avokoa ny herinaratra sy ny fifandraisana tao amin'ny faritra. Namely ny faritra Cebu, Panay, Negros, sy Palawan ihany koa i Yolanda, rivo-doza mahery vaika indrindra manerantany tamin'ity taona ity.
Nampiasaina ny teny ifankafantarana #yolandaph mba hanarahana izay zava-nitranga tao amin'ireo faritra rava tao amin'ny firenena. Ireto ambany ireto, sary sasany mampiseho ireo fahasimbana goavana naterak'i Haiyan-Yolanda:
SARY avy amin'i Ryan Lim/Lapa: faharavàna ao Leyte tazanina avy eny an-habakabaka
Nisidina tao Guiuan, atsinanan'i Samar androany maraina ny voromby Nomad an'ny tafika an'habakabaka Filipina hanombana ireo voka-dratsy nateraky ny rivo-doza Yolanda. An-dalana ny fanampiana.
PHOTO: Afte r #YolandaPH storm surge engulfed Tacloban airport; residents line up for relief goods @inquirerdotnet pic.twitter.com/f3uW9DUfGI
SARY: Taorian'ny fandalovan'ny #YolandaPH tao amin'ny seranam-piaramanidina Tacloban; milahatra ny olona maka fanampiana ilaina amin'ny fiainana andavanandro (PPN)
Tsy voakitika ny lalam-piaramanidina ao amin'ny Seranana Tacloban, saingy nahitam-pahasimbana goavana kosa ny fotodrafitrasa.
Ny fanomezana fanampiana ilaina amin'ny andavanandro no laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao. Rava tanteraka i Tacloban. ANDEHA ISIKA HANAMPY!.
Mivavaka ho an'ny rehetra ao antanànan'i Tacloban. 🙁 Aza very fanantenana. Miaraka amintsika ANDRIAMANITRA 🙂
Fiangonana 30 km miala ao Tacloban, ao Tanauan, nampiasaina ho tobim-pialofana, 0.14 maily miala ny ranomasimbe
[SARY] Lehilahy iray maka aina ao anaty trano rava, akaikin'ny sambo nasidin'ny #YolandaPH tao an-tanety tao Tacloban, Leyte. EPA.
Sarin'ny arabenay aty Dulag, Leyte. Ery ankavanana indrindra ny tranonay. Tsy dia hita.
Ireo avotra tamin'ny tafio-drivotra mandeha eny amin'ny araben'i Ormoc, Leyte. Jereo ireo hazo sy andrin-jiro mianjera. Sary avy amin'i Katreena Bisnar tao amin'ny Facebook
Tsy misy vonjy, tsy misy fampahalalam-baovao, tsy misy fifandraisana an-tariby, tsy misy fanampiana. Saiky ny 95% tao Capiz dia rava avokoa
Mba hampilazàna ireo namana sy havana mikasika ny zava-manjò, nandefa filazana an-tsoratra miaraka amin'ny sary ho an'ireo mpanao gazety amin'ny fahitalavitra ireo hany velona ary narakitr'ireto mpanao gazety ireto tao amin'ny aterineto avy hatrany ny hafatra. Fanampin'izany, biraon'ny depiote iray ao Leyte nanangona ny lisitr'ireo olona hany velona ihany koa.
Hoy ny fivakin'ny filazana: Namoy ny ainy ny rahalahy, reny sy ray. Azafady ilazao ny tsirairay. Tsy misy fifandraisana sy herinaratra eto. Aaron Almadro. Sary tao amin'ny Sampam-pahalalambavaovao GMA.
Ireto ambany ireto ny fihetseham-po hafa tao amin'ny Twitter:
Miha-mitombo hatrany ny isan'ireo namoy ny ainy ary mandratra ny fo ny mijery ireo sary misy ny voka-dratsin'i #YolandaPH. Mampalahelo fa tsy mba afaka nosorohana izao.
Mila mitaky ny mangarahara ihany koa izahay mba ahafantarana fa tonga soa aman-tsara any amin'ny andefasana azy ireo vola fanomezana sy fanampiana.
Nokorontaniko ny lalimoarako mba hangalako ankanjo ho an'ireo lasibatry ny rivo-doza.
Manantena aho fa ho fantatry ny vahoakan'i Tacloban fa tsy manampy ny tenany izy ireo raha manohy mandroba.
Milaza momba ny fandrobàna tao amin'ny toera-pivarotana iray tao Tacloban ity sioka farany ity, izay nitadiavan'ireo hany velona feno hakiviana rano sy sakafo. Nitsikera izany fihetsika izany ihany koa i Pinoy Bro :
tsy azo ekena, ary manorisory ahy tanteraka ny tsy nahitako sy tsy nandrenesako na dia tsikera tokana aza avy amin'ny fampahalalam-baovao mikasika ity tranga fandrobàna ity, hatramin'izao aloha. Miala tsiny satria mety hihevitra ianareo fa tsy manana fangorahana na fitiavana aho manoloana ny zava-misy, na koa fiantrana ho an'ireo mpandroba izay lasibatry ny rivo-doza, saingy mahatsapa fotsiny aho fa misy zavatra tsy mety ao.
Ary raha ianao ohatra no manana fivarotana kely, na koa magazay madinika mivarotra sari-sari (akanjo karana), ary avy eo fantatrao fa nidiran'olona sy norobainy ny entanao. Azafady ry vahoaka Filipina, tsy mampitovy antsika izany.
Saingy niantso ho amin'ny fahazoana i Arnold Alamon:
Misy fivakisana ara-tsosialy miserana ankehitriny ao Tacloban . Tokony miombona alahelo isika amin'ny fijerentsika ireo rahalahintsika izay vao avy niaina zava-doza mafy indrindra. Araka ny fandehan-javatra hitantsika, mety namoy havana iray na roa ny mponina tsirairay avy ao amin'ity tanàna ravan'ny rivo-doza ity, ka lasa mitrongy vao homana ankehitriny ary tsy norarahiana. Taratry ny tsy fahatokisan'ny mponina ny fanjakana hamaly ny filàn'izy ireo avy hatrany ity lazaina fa fandrobàna ity fa tsy dia hoe sitrapon'ny vahoakan'i Tacloban loatra.